Spa – CEO Business & Management Magazine
ခေတ်မီပြည့်စုံတဲ့ မြန်မာ့ပထမဆုံး အလှအပနဲ့ကျန်းမာရေးစင်တာ HLA Lifestyle Wellness Centre ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ HLA Lifestyle Group ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Felix Chen က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ဟောင်ကောင်ထိပ်တန်းအလှကုန်လုပ်ငန်း CMM International Group တည်ထောင်သူ ပါမောက္ခ Cheng Ming Mingနဲ့ Miss Asia အလှမယ်ဟောင်း ဟောင်ကောင်မင်းသမီး Candy Law တို့လည်း တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ HLA အလှအပနဲ့ကျန်းမာရေးစင်တာဟာ စတုရန်းမီတာ ၅၀၀၀ကျယ်ဝန်းပြီး၊ အင်းလျားကန်အ လှအပကို စီးမိုးရှုမြင်နိုင်တဲ့ ၃ ထပ်အဆောက်အဦးနှစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ အာရှရိုးရာ ဆေးပညာကုထုံးနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနည်းပညာပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပကုထုံးများ၊ […]
Posted On February 18, 2019, By Editorial
Myanmar Culture Valley မှာ ဈေးဝယ်ထွက်ရင်း၊ မုန့်စားရင်း အချိန်ခဏပေးရုံနဲ့ အလှအပအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုရစေမယ့် Nail Culture ဆိုင်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Nail Culture နဲ့ Spa မှာ ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ ————– Nail Culture မှာဆိုရင်တော့ လက်သည်းပုံဖော်တာကစလို့ လက်သည်းနဲ့ လက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ၊ ခြေထောက်ကြေးချွတ်ပေါင်းတင်၊ လက်ကြေးချွတ်ပေါင်းတင်၊ လက်ဖယောင်းသွင်း၊ ခြေထောက်ဖယောင်းသွင်းတာတို့ လုပ်လို့ရပါတယ်။ Spa မှာတော့ Facial သီးသန့်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်နှာကို ရေဓာတ်ဖြည့်တာ၊ မျက်နှာ Whitening လုပ်တာ၊ မျက်နှာကို ပိုပြီးနုပျိုအောင်လုပ်တာ၊ အရေးအကြောင်းအတွက် လုပ်ပေးတာတို့ ရှိပါတယ်။ Nail Culture မှာ ဘယ်လိုပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေသုံးလဲ ————– Nail Culture မှာဆိုရင်တော့ OPI […]
Posted On March 9, 2018, By Editorial
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်စေဖို့ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ ယောဂကျင့်စဉ် ၅ မျိုး
နေ့ရက်တစ်ရက် ကုန်ဆုံးချိန်ဟာ စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာက တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို လိုအပ်နေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေချိန်မှာ အတွေးတွေကို စိတ်တိုင်းကျ ပုံဖော်နိုင်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အနာဂတ်ကို ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အနားယူချိန်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စိတ်တည်ငြိမ်အောင် လုပ်နေကျပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ညဘက်မှာ ယောဂကျင့်တာက ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာရွှင်လန်းစေပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ ပြေလျော့စေနိုင်ကာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်စေပါတယ်။ ဒီယောဂကျင့်စဉ် ငါးမျိုးထဲကတစ်မျိုးကို စက္ကန့်သုံးဆယ်ကနေ ခြောက်ဆယ်အထိ အစဉ်လိုက် လုပ်ဆောင်သွားပါ။ ဒါမှမဟုတ် တစ်မျိုးချင်းစီလုပ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်တာက ကြွက်သားတင်းမာမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ကိုယ်ရောစိတ်ပါ လန်းဆန်းပေါ့ပါးစေပါတယ်။ အနေအထားတစ်ခု လုပ်ဆောင်တိုင်း အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ အောက်ဆီဂျင် အလုံအလောက်ရတာက ခန္ဓာကိုယ်ကို လန်းဆန်းစေပါတယ်။ ညဘက်မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အိပ်ပျော်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ယောဂကျင့်စဉ်ငါးမျိုးကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ Staff […]
Posted On July 10, 2017, By Editorial
Myan Spa (Relax in myanmar tradition)
Chemical မပါဘဲ မြန်မာနိုင်ငံက သဘာဝပစ္စည်းစစ်စစ်တွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Products တွေ၊ မြန်မာ့ရိုးရာ၊ မြန်မာနှိပ်နည်းတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ Myan Spa တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Myan Spa ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် —————————– Myan Spa ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ Myan Spa ဆိုတာက မြန်မာ့ Spa လို့ ပြောတာပါ။ Myan Spa မှာ အခန်း ၁၃ ခန်းရှိပြီး အခန်းနာမည်တွေကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု နာမည်တွေဖြစ်တဲ့ ကရင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း စတာတွေ ပေးထားပါတယ်။ ဖွင့်တဲ့ Music ကလည်း မြန်မာ့ဆိုင်းသံ၊ စောင်းသံတွေနဲ့ ပတ္တလားသံတွေကို ဖွင့်ပါတယ်။ […]
Posted On June 26, 2017, By Editorial
De L’amour Health & Spa
အလှအပတွေကို ဂရုစိုက်လာကြတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ အလှအပထိန်းသိမ်းချင်တဲ့ လူတွေအတွက်ပါဆိုတဲ့ Spa De L'amour အကြောင်းကို Spa De L'amour ရဲ့ Business Coordinator မမေပိုးဖြူနဲ့ဆုံခိုက် မေးမြန်းခဲ့တာတွေကို မိတ်ဆက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက် . . . အခုခေတ်ကြီးထဲမှာ လူတိုင်းက အလှအပကို ဂရုစိုက်လာကြပါပြီ။ လူတိုင်းကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှလှပပ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း နေလာကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်က မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ အလှအပကြိုက်တဲ့ လူတွေအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Spa De L'amour ကို ဖွင့်လှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်လိပ်စာနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်မယ့်ဖုန်းနံပါတ် . . . Spa De L'amour ရဲ့လိပ်စာက အမှတ် ၁၃၇ (ဃ)၊ သံလွင်လမ်း၊ […]
Posted On April 7, 2017, By Editorial
Chemical မပါဘဲ သဘာဝပစ္စည်းစစ်စစ်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Prael Products တွေနဲ့ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ၀န်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ Prael Spa အကြောင်း မိတ်ဆက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက် . . . Prael Products တွေကို အိမ်မှာဝယ်သုံးဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ Prael Product တွေကို သိမ်းဆည်းရတာ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက် Prael Spa မှာ အပန်းလည်းဖြေရင်း နုပျိုလှပမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆိုင်ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်လိပ်စာနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် ဖုန်းနံပါတ် . . . Prael Spa Yangon ရဲ့လိပ်စာက အမှတ် ၄ ၊ ရွှေတောင်ကြား ၁ လမ်း၊ ကမ္ဘောဇရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ […]
Posted On February 17, 2017, By Editorial
ကျန်းမာရေးနဲ့ Message ပိုင်းကို အဓိကထားပြီး ၀န်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Health House အကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ဖိစီးမှုတွေများပြီး အညောင်းမိနေသူတွေကို အပန်းပြေပြီး ကျန်းမာလှပစေမယ့် နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်လေးအကြောင်းကို Health House ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်နန်းသန္တာအေး (Jasmine) က ပြောပြပေးပါတယ်။ ဆိုင်စဖွင့်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက် . . . ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ဝင်ဘာလမှာ Health House (Waizayandar) ကိုစဖွင့်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လမှာတော့ Health House (Nat Mauk Yeik Thar) ကို ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က ၀ါသနာလည်းပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်း လုပ်ချင်တဲ့အတွက် ဆိုင်ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အလှအပထက် ကျန်းမာရေးကို အဓိကထားပြီး […]
Posted On December 21, 2016, By Editorial
အရေးပါလာသည့် Customerization ယနေ့ခေတ်တွင် အရေးပါလာသည်မှာ မိမိကုန်ပစ္စည်း၊ မိမိအမှတ်တံဆိပ်ကို Customer များမှ စွဲစွဲမြဲမြဲ နှစ်သက်ပြီး ၀ယ်ယူအားပေးရန် Customer Loyalty ရရှိရန် လိုအပ်လာခြင်းဖြစ်ပေသည်။ Customer Loyalty ရရှိရန်အတွက် Customer Care သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ Customer Care ဟုဆိုလျှင် မည်သည့်အရာကို Care လုပ်ရမည်နည်း။ Customer များ၏ Satisfaction ဆိုသည့် စိတ်ကျေနပ်မှုကို Care လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ Customer များ စိတ်ကျေနပ်မှုရသည် ၊ မရသည်ကို သိလိုပါက Customer Relationship နှင့် ပြန်ချိန်ညှိရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အဓိကအချက်အနေနှင့် ပြောရမည်ဆိုလျှင် အချက်ငါးချက်ရှိပြီး ယင်းအချက်ငါးချက်သည် အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်နေပါသည်။ ၁။ […]
Posted On November 22, 2016, By Editorial
ဆိုင်တည်နေရာနဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ် . . . အမှတ်၁၃၅၊ မြေညီထပ်၊ အင်းလျားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာပါ။ ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ ၀၉၂၅၄၅၀၅၃၂၆၊ ၀၉၇၈၂၂၉၈၉၁၁ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန် . . . မနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ၉ နာရီအထိ ဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အသုံးပြုတဲ့ Brand တွေ . . . အဓိကအားဖြင့် Body Spa ၊ Facial Spa ၊ Hair Treatment ၊ Manicure နဲ့ Pedicure Spa တွေ လုပ်ပါတယ်။ ဆံပင်အတွက်ဆိုရင် Revlon Professional (Made in […]
Posted On October 13, 2016, By Editorial
မန္တလေးမြို့ရဲ့ နေရာကျယ်ဝန်းမှုနဲ့အတူ သက်သောင့်သက်သာ အနားယူနိုင်မယ့် ၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေစုံလင်တဲ့ Moon Angel Beauty Spa နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဆိုင်တည်နေရာနဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ် . . . အမှတ် 3KA ၊ လမ်း၃၀ (၅၈ လမ်းနဲ့ ၅၉ လမ်းကြား)၊ မန္တလေးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၂-၆၇၄၆၇၊ ၀၉-၇၉၆၇၇၇၉၀၃-၅ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန် . . . မနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ၈ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ အမျိုးသမီးသီးသန့်ဆိုင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက် ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ဖြစ်ပုံနဲ့ရည်ရွယ်ချက် . . . ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ […]
Posted On July 1, 2016, By Editorial